Howgalka Kismaayo Oo Galay Saacadii Shanaad+Faahfaahin Cusub. – Calamada.com
Howgalka Kismaayo Oo Galay Saacadii Shanaad+Faahfaahin Cusub.
Katiibada Istish-haadiyiinta ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Galinkii dambe ee Maanta Weerar culus ku qaaday Hoteel si aad ah ay u ilaaliyaan Ciidamada Saliibiyiinta Kenya kaasi oo ku yaala Magaalada Kismaayo oo xarun u ah Maamulka Gaala Raaca Isku magacaabay Jubbo Land.
Weerarka ka socda Hoteelka Cas-caseey ayaa galay Saacadii Shanaad, Waxeyna Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin wali si toos ah u maamulayaan gacan ku heynta Hoteelka.
Rasaas ayaa laga maqlayaa gudaha Hoteelka taasi oo ah Howlgal Toogasho ah oo Ciidamada Mujaahidiinta ay ka wadaan gudaha Hoteelka, Iyadoona Ciidamada Kenya iyo Maleeshiyaatka Kabo Qaadka u ah ay Rasaas ka ridanayaan Banaanka hore ee Hoteelka.
Marba Marka kasii dambeysa waxaa sii kordhaya Khasaaraha Murtadiinta lagu gaarsiiyay Howlgalkan Barakeysan ee Ciidamada Mujaahidiinta ka wadaan Gudaha Hoteelka, Waxaana Xusid Mudan in Howlgalkan kusoo aadaya xilli Olola Doorasha ah ay ka socota Magaalada Kismaayo.
Previous: Ciidamada Kenya Iyo Kuwa Jubbo Land Oo Lagu Jibiyay Weerarka Ka Socda Kismaayo.
Next: Faahfahin Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Weerarka Kismaayo.